Chọpụta B2B ọbịa na gị WordPress Blog | Martech Zone
Izu ole na ole gara aga, ndị ukwu nọ na Anya oku nyere m ngosipụta nke ngwaahịa ọhụrụ ha na-ewu akpọrọ Aha. Ngwaọrụ a dị oke egwu, na-enye nkọwa miri emi banyere azụmaahịa ndị na-eleta saịtị gị ma na-enye peeji ndị ha jerela, otu esi zigara ha, yana mkpụrụokwu ọ bụla ha nwere ike ịchọ mgbe ha rutere saịtị gị.
Ozugbo ahụ, ajụrụ m John Nichols ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmekọrịta ha ma mepee AhaTag WordPress Plugin na ya, na-ekele, kwetara! Anyị mechara ngwa ngwa mbụ nke ngwa mgbakwunye taa ma debanye aha ya na WordPress repository n'isi ụtụtụ a. N'iji API ha, ngwa mgbakwunye na-enye gị ohere ịlele ndị ọbịa 25 kachasị ọhụrụ na saịtị gị kpọmkwem site na dashboard n'ime blọọgụ WordPress gị!
Ihe mgbakwunye ahụ abụghị ihe nnọchi maka ngwa ọrụ nke VBTools na-enye n'ime Aha ngwa NameTag. N'ime ngwa AhaTag, ịnwere ike ịjụ akara ụbọchị gị ma wepụta faịlụ ahụ n'ọtụtụ ụdị faịlị. Ihe mgbakwunye ahụ bụ naanị iji tinye koodu nsuso na WordPress yana ịnye dashboard ị nwere ike ịlele otu mgbe ị na-emelite saịtị gị.
The Aha ọrụ dịkwa oke ọnụ - n’okpuru $ 30 kwa ọnwa. Nke ahụ bụ ọnụahịa maka ụdị ngwa ọrụ B2B bara uru. Ekele dịrị John maka nnukwu ngwaahịa na nnukwu ọnụahịa. Anyị na-enwe ekele maka ohere ịzụlite njikọta maka ngwaahịa gị n'ime WordPress! N'ezie, anyị etinyela njikọ njikọta anyị n'ime ngwa mgbakwunye ahụ ekesara kpamkpam yana n'ime blọgụ a.
Iji wụnye ngwa mgbakwunye, nanị chọọ “NameTag” n'ime peeji nke plugins WordPress, gbakwunye ma wụnye ya. Ihe mgbakwunye ahụ ga-enye gị njikọ iji debanye aha ọrụ ahụ ma nweta ozi gị. Obi ụtọ ịchụ nta!